ငွေပေးချေမှု - U Hton Goldsmith & Jewellery
Home » ငွေပေးချေမှု
ပြည်တွင်း ပို့ခ Delivery Fees ဘယ်လိုယူသလဲ?
ခန်မှန်းခြေ ပြည်တွင်းတွင် မြို့နယ်အလိုက်ပေါ်မူတည်၍ ၃၀၀၀ကျပ် မှ ၆၀၀၀ကျပ် ဝန်းကျင်ယူပါသည်။ ငွေကောက်ခံခ Delivery ကို ပေးရမည်ဆိုပါက အနည်းငယ်ပို၍ကျသင့်ပါမည်။ ငွေကောက်ခံခြင်းနှင့် Delivery Charges သည် Delivery Service ၏ဝန်ဆောင်မှုစရိတ်ဖြစ်သောကြောင့် ဦးထုံရွှေပန်းထိမ်မှ ကောက်ခံခြင်းမဟုတ်ပါ။
ပြည်ပ ပို့ခ Delivery Fees ဘယ်လိုယူသလဲ?
ပြည်ပနိုင်ငံများ၏ ပို့ခများမှာ အထည်၊ အလေးချိန်နှင့် တန်ဖိုးပေါ်မူတည်၍ ကွာဟမှုရှိပါသည်။ အသေးစိတ်ကို Messenger မှတဆင့် လူကြီးမင်းများ မေးမြန်းလိုသော မေးခွန်းလေးများ အသေးစိတ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
လူကြီးမင်းများ မှာယူသော အထည်ပစ္စည်းသည် Instock ရှိပါက ငွေကြိုလွှဲပေးရမည်။ Instock မရှိပါက အထည်၏တန်ဖိုးကို စရန်ငွေ 50% မှ 80% ကြိုပေးရမည်။ အထည်ထွက်လာပါက ဈေးနှုန်းအတိအကျတွက်ပေးပါသည်။ Online မှဝယ်ယူသော Customer များကို အထည်၏အလေးချိန်အား Digital Scale ဖြင့် ချိန်တွယ်၍ပုံပို့ပေးပါသည်။ ဘောက်ချာတန်ဖိုးထွက်လာလျှင်လည်း ကျသင့်ငွေအား Bank Transfer မှလွှဲပေးလို့ရပါသည်။ ငွေလွှဲဝင်လျှင် ရွှေထည်ပစ္စည်းအား Customer ထံပို့ပေးပါသည်။
မည်သည့်နည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ ငွေပေးချေရမည်နည်း?
CASH ON DELIVERY / AYA BANK / CB BANK / KBZ BANK / AGD BANK / YOMA BANK / CHASE / ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ် / IME / KBZ PAY / MASTER CARD / VISA / WAVE MONEY / WESTERN UNION / ONE PAY တို့ဖြင့်ငွေပေးချေနိုင်ပါသည်။
Cash On Delivery ပေးချေလို့ရပါသလား?
ရန်ကုန်မြို့တွင်း အထည်တန်ဖိုး 300,000 အောက်ဖြစ်လျှင် အိမ်အရောက်ငွေချေနိုင်ပါသည်။ အထည်တန်ဖိုး 300,000 အထက်ဖြစ်ပါက ငွေကြိုလွှဲပေးရမည်။ အထည်ချိန်များလျှင် ညှိလို့ရပါသည်။ နန်းကြိတ်ထည်များကိုမူ ငွေကြိုလွှဲအပြီးမှသာ ပို့ပေးပါသည်။ နယ်မှ Customer များ Cash On Delivery မရပါ။
Bank Transfer, Wave Money, Mobile Banking, Visa, Master, IME, Western Union တို့ဖြင့်ပေးချေနိုင်ပါသည်။
Wave Money, Mobile Money, Visa, Master, IME, Western Union တို့ဖြင့်ပေးချေရန် ဦးထုံရွှေပန်းထိမ်သို့ ဖုန်း(သို့) Viber (သို့) Messenger မှမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
ACCOUNT NAME : U Hton Goldsmith And Jewellery
ACCOUNT NUMBER : 00430200403784001
ACCOUNT NUMBER : 0171202010025127
ACCOUNT NUMBER : 0010600300005185
ACCOUNT NAME : U Hton Jewellery And Goldsmith
ACCOUNT NUMBER : 007644160000338
ACCOUNT NAME : Win And Myint Company Limited
ACCOUNT NUMBER : 3250001005694014
ACCOUNT NUMBER : 0211210028458
ရနိုင်ပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို အောက်ပါ Page မှာဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
မှာယူထားသောပစ္စည်းလွဲချော်ခဲ့ပါက ပစ္စည်းရရှိပြီး ၂၄နာရီအတွင်း ပြန်လည်ပြောပြညှိနှိုင်းနိုင်ပါသည်။
ဘယ်လို Currency မျိုးကိုလက်ခံပါသလဲ?
Order မှာယူထားသော Customer ရဲ့လိုအပ်ချက်ကို ညှိနှိုင်းနိုင်ပါသည်။ ညှိနှိုင်းလိုပါက ဖုန်း 09-965152335 (သို့မဟုတ်) Messenger သို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
အရစ်ကျဝယ်ယူရင် ငွေပေးချေရမည့်ရက် ကန့်သတ်ထားတာရှိလား?
ဖော်ပြပါအရစ်ကျ Link တွင်ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင်း ရွှေထည်တန်ဖိုး 300,000 အောက်ဖြစ်ပါက စရန်ငွေပေးရန်မလိုပါ။ ရွှေထည်တန်ဖိုး 300,000 အထက်ဖြစ်ပါက 50% မှ 80% အထိ စရန်ပေးချေရမည်။ နယ်မှ Customer များသည် ငွေအပြီးကြိုလွှဲရမည်ဖြစ်ပါသည်။
စရန်ငွေကို အထည်၏တန်ဖိုးပေါ်မူတည်၍ သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် 50% မှ 80% အထိယူပါသည်။